Senator ka tirsan Aqalka Sare ee DF oo is casilay | KEYDMEDIA ONLINE
Senator ka tirsan Aqalka Sare ee DF oo is casilay
Mid kamida Senator -rada kasoo jeeda gobollada Waqooyi oo lagu magacaabo Mustaf Maxamuud Qodax ayaa iska casilay xilkii Xildhibaanimo ee golaha Aqalka Sare
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa si rasmi ah xilkii xildhibaanimo iska casilay Senator Mustaf Maxamed oo loo yaqaan Mustaf Qodax oo ka tirsanaa golaha Aqalka Saree e BJFS.
Mustaf Qodax oo ku sugan waddanka Isu-tagga Imaaraat -ka Carabta ayaa la kulmay qaar kamida madaxda Xisbiyada Soomaaliland, waxa uuna goob fagaare ah ku dhaliilay hoggaanka dowladda Soomaaliya oo uu ku eedeeyay in aanay dooneyn in ay ka mira dhaliyaan wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya.
Waxa uu si aada u dhaliilay dowladda Soomaaliya oo uu ugu yeeray “Nidaamka Koonfurta” waxa uuna iska fogeeyay in uu xil dambe u qaban doono Koonfurta, waa sida uu hadalka u yiri, waxaana sidoo kale la filayaa in uu ku laaban doono magaalada Hargeysa markii uu cafis weydiisto madaxweyne Biixi.
Horay waxaa sidan oo kale dabayaaqadii sanadkan cafis u weydiistay madaxweyne Biixi Ra’iisulwasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya ahaana Xildhibaan Maxamed Cumar Carte.
Mustaf Qodax Maareeye ku xigeenka Taleefishinka Qaranka Soomaaliland ayuu horay usoo noqday inta uusan si rasmi ah xilka Senator -nimada ugu guuleysan, Agaasime Guud ayuu sidoo kale kasoo noqday dowladdii uu hoggaaminayay Madaxweyne Axmed Siilaanyo.